I-IKEA Planner ye-Mac | Ngivela kwa-mac
UPablo Aparicio | | Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac
Uqinisekile uyazi IKEA. Isitolo esidumile sokwenza nokuthengisa ifenisha sidume umhlaba wonke. Futhi akukhona ukuthi luhlobo lwesikole noma inkambo yokuthi sifunde ukuhlanganisa ifenisha ngokwethu, kepha futhi, uma kungenjalo ngoba kuyisixazululo sokonga futhi sinikeza ikhathalogi enkulu esivumela ukuthi sinikeze indlu yonke ngaphandle kokuthi vakashela izitolo eziningana zalo. Futhi, okungcono, futhi banikela ngesoftware ukuze sikwazi ukuklama izingxenye zendlu yethu ngaphandle kokuphuma egumbini lethu, njengoba kunjalo umhleli IKEA Ikhaya Planner.
Njengoba ukwazi ukubona kuvidiyo elandelayo, nge Umhleli we-IKEA I-Home Planner singakwazi yakha ukuthi sifuna ikhishi lethu libe njani. Lokhu kungikhumbuza kancane (kancane) lapho ngabona umfowethu enza umsebenzi wakhe we-Autocad eyunivesithi, lapho kwakudingeka aklame izindlu ezinezicabha, amabhethri, ifenisha nakho konke okunye. Into enhle ngalolu hlobo lwesicelo ukuthi zingamathuluzi aphelele kakhulu, kepha okubi ukuthi ukusetshenziswa kwayo kungahle kungabi lula kubasebenzisi abaningi. Kunoma ikuphi, ikhululekile ngokuphelele futhi ingafakwa eSafari, ngakho-ke yini esingalahlekelwa yiyo? Isikhathi esincane, yebo. Sikukhombisa ukuthi uyifaka kanjani i-IKEA Home Planner eSafari kwi-Mac yakho.
1 Izidingo zesistimu encane ku-OS X
1.1 Iziphequluli ezisekelwayo
2 Ungayifaka kanjani i-IKEA Home Planner eSafari
3 Ungayikhipha kanjani i-plug-in ye-IKEA planner
Izidingo zesistimu encane ku-OS X
Njengoba ubona ngezansi, kuzoba okungajwayelekile ukuthi ungabi nayo iMac ehambisana nalolu hlelo lwe-IKEA. Uma sibheka ukuthi i-OS X Lion 10.7.2 ikhishwe eminyakeni engaphezu kwengu-5 edlule, singaqiniseka ukuthi izosebenza noma iyiphi iMac kusuka ngo-2010 kuqhubeke, kepha iMac yami ivela ku-2009 futhi idlula kude izidingo ezisezingeni eliphansi, ezinjengokulandelayo:
1 gigahertz (GHz) noma ngaphezulu (yama-processor we-Intel kuphela).
Ikhadi lezithombe: 128 MB.
Ukulungiswa kwesikrini: 1024 x 768.
Ukuxhumeka kwe-inthanethi kwe-Broadband.
I-Mac OS X, i-Lion 10.7.2 noma ngaphezulu.
Ungayifaka kanjani i-IKEA Home Planner eSafari
Njenge-plug-in, ukuyifaka kulula kakhulu. Vele wenze okulandelayo:
Sithola iwebhusayithi yakho http://kitchenplanner.ikea.com/ES/UI/Pages/VPUI.htm
Sichofoza FAKA IDIVAYISI. Sizolanda i-plug-in kufolda yokulanda.
Sichofoza kabili kufayela elilandiwe. Lokhu kuzovula isithombe sediski futhi sizobona isinyathelo esilandelayo okufanele sisithathe esikhonjiswe ngomcibisholo.
Sihudulela i-plug-in kufolda engakwesokudla.
Sifaka iphasiwedi bese sicindezela ukhiye we-Enter.
Ekugcineni, uma ngabe iSafari ivulekile, siyayivala, siyivule kabusha bese sifinyelela ikhasi lewebhu kusuka kusinyathelo 1 futhi.
Ukuze sikwazi ukufinyelela kumhleli, into yokuqala okuzofanele siyenze dala i-akhawunti ye-IKEA, inqobo nje uma besingayidalelwanga esinye isizathu. Uma lokhu kungenjalo, kuyindaba yokugcwalisa izinkambu ezimbalwa ukuthola igama lomsebenzisi nephasiwedi yethu. Uma sesibhalisiwe, singangena ngokujwayelekile.
Angiyena uchwepheshe kulolu hlobo lwesicelo, ngakho-ke uma ufuna ukwazi ukuthi isebenza kanjani, kungcono uma ubuka ividiyo ku-YouTube njengaleyo ebengikunikeze yona phambilini. Futhi, lapho ungasadingi i-plug-in, ungayisusa wenza izinyathelo engizichazayo ephuzwini elilandelayo.
Ungayikhipha kanjani i-plug-in ye-IKEA planner
Ukukhipha akuyona into elula kangako, kepha akusikho ukuthi kunzima kakhulu. Sizokwenza ngale ndlela elandelayo:
Kubha ephezulu, sichofoza ku- "go".
Sicindezela ukhiye we-ALT futhi sizobona ukuthi ifolda entsha ivela kanjani: Ilabhulali. Siyayikhetha.
Manje sisesha futhi sifaka ifolda Ama-plug-in e-inthanethi.
Sibheka ifayela i-plugin futhi siyayisusa.
Siqala kabusha iSafari.
Ongakukhetha: yize kungadingeki, ukususwa kwanoma yiliphi ifayela kumasistimu wokusebenza we-Mac akuphelelanga ngo-100% size sithulule udoti, ngakho-ke uma singenalutho olubalulekile, siluthulula.
Uma ungenayo iMac, kufanele wazi ukuthi i-IKEA Home Planner iyahambisana kusuka kufayela le- I-Internet Explorer 9 kusuka kuWindows Vista kuya kunguqulo yakamuva yesiphequluli sakudala seMicrosoft. Akuhambisani ne-Microsoft Edge noma i-Internet Explorer ku-Windows XP. Uma ungabasebenzisi beLinux, futhi lokhu kuwumkhuba omubi, ngeke ukwazi ukusebenzisa lesi sihleli ngaphandle kokuthi usethule ngomshini obonakalayo wesinye sezinhlelo ezisebenzayo ezisekelwayo.
Manje uyazi. Uma ucabanga ukuguqula ikhishi lakho noma umane ufuna ukuklama lelo ozolithola ekhaya lakho elisha, kufanele ubheke umhleli we-IKEA. Kuhlala kungcono njalo ukuhlola ukuthi ukuphi asenzeni ubudlabha Kufanele sikwenze futhi sizisole ngokuhamba kwesikhathi, noma njengamanje senza umonakalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac » IKEA Planner for Mac
Vala izibuyekezo ezizenzakalelayo ku-Apple TV 4 yakho
I-iPhone SE ne-iPad Pro 9,7 ", i-OS X 10.11.4 ne-iOS 9.3, okusemqoka ngoMashi 21 nokunye okuningi. Okuhamba phambili ngesonto ngivela kwaMac